Junior Win (ဂျူနီယာဝင်း) : August 2007
If you can talk with crowds and keep your virtue,' Or walk with Kings - nor lose the common touch,if neither foes nor loving friends can hurt you,If all men count with you, but none too much;If you can fill the unforgiving minuteWith sixty seconds' worth of distance run,Yours is the Earth and everything that's in it,And - which is more - you'll beaMan, my son
ဧပြီလ ပိတောက်ပွင့်သစ် မဂ္ဂဇင်း ၂၀၀၆ တွင် Rudyard Kipling ၏ ကမ္ဘာကျော် If ကဗျာ ရှည်ကြီး ကို
ဂျူနီယာဝင်း က ‘’ အဖိုးတန် စကားတစ်ခွန်း ‘’ဟူ ၍ ဘာသာပြန်ဆိုထားသည် ကို ယခုလို တွေ့လိုက်ရပါသည်။
ဘလောက် ဖတ်သူများ လွယ်လွယ် ကူကူခံစား လို့ရအောင် ကဗျာ တစ်ခုလုံးပြန်ဆိုထားမူကိုသာ ဆွဲယူထားပါကြောင်း ။
(ထိုကဗျာ ကို English for All ၂၀၀၆ မတ်လ တွင် လည်း ဂျူနီယာဝင်း က ဘာသာပြန်ဆိုဖော်ပြခဲ့ကြောင်းပါ။လောကကြီး
ထဲကိုဝင်ရောက်တော့ မည့် သားတစ်ယောက်ကိုပေး တဲ့ အဖိုးတန်စကား တစ်ခွန်း လို့ပဲဆိုကြပါစို့ တဲ့။)
မင်းနံဘေးက လူတွေက စိတ်မထိန်းနိုင် ဖြစ်တဲ့အခါ
မင်းက မင်းရဲ့ စိတ်ကို ထိန်းထားနိုင်လို့ ရှိရင် .........”
သူတို့ မင်းကို သံသယရှိနေတဲ့အခါ
မင်းကမင်းရဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ သူတို့ကို နားလည်နိုင်လို့ရှိရင်..... ”
မင်းမှာ စိတ်ရှည်သည်းခံမှုစိတ် အပြည့်ရှိလို့ရှိရင်........
သူများတွေက လိမ်ညာပေမယ့် မင်းက မမုန်းတီးဘဲနေနိုင်လို့ရှိရင်.........
မင်းက အေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်ပြီး သူများတွေကို ဆရာ မလုပ်ဘဲ နေနိုင်လို့ရှိရင်...........”
မင်းစိတ်ကူးတွေ များစွာရှိသော်လည်း စိတ်ကူးထဲမှာကြီးပဲ မျောမနေလို့ရှိရင်..........
မင်းမှာ အတွေးတွေရှိသော်လည်း အတွေးတွေထဲမှာပဲ နစ်မွမ်းမနေလို့ရှိရင်..........
မင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကို အယောင်ဆောင်နေတဲ့ အရာတွေပဲလို့
မင်းပြောတဲ့ အမှန်စကားကို ကြားလူတွေက အထင်အမြင်မှားအောင်
လှည့်ပတ်ပြောဆိုပြီး မင်းကို ထောင်ခြောက်ဆင်တာကို မင်းခံနိုင်ရည်ရှိလို့ရှိရင်.........
မင်းအသက်နဲ့လဲပြီး တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ သဲထဲရေသွန်သလို
အလဟသ ဖြစ်သွားတာကို ကြည့်နိုင်လို့ရှိရင် ........
အဲဒါတွေကို ပင်ပင်ပန်းပန်း ပြန်ပြီး မင်းကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်နိုင်စွမ်း ရှိလို့ရှိရင်........”
ကိုယ်ရလာတဲ့ စီးပွားဥစာတွေ အကုန်လုံးကို စွန့်စားပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ရှိရင်
အဲဒီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာတွေ အကုန်လုံး တစ်နေရာထဲမှာ ဆုံးရှုံးသွားလို့ရှိရင်
မင်းဟာ အစကနေ ပြန်စရဲတဲ့သတ္တိရှိပြီးတော့ မင်းရှုံးနိမ့်မှုတွေရဲ့ အကြောင်းကိုလည်း
ဘာတစ်ခွန်းမှ ပြန်မပြောဘဲ နေနိုင်လို့ရှိရင်.........
မင်းကိုယ်မင်း “တောင့်ထားစမ်း” ဆိုပြီး တင်းထားတဲ့စိတ်ကလွဲလို့
တစ်ခြားဘာမှ မကျန်တော့တာတောင်မှ မင်းဟာ အရှုံးမပေးဘဲ နေနိုင်လို့ရှိရင်........”
မင်းဟာ သာမန်လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်၊
ဘုရင်တွေနဲ့အတူ လမ်းလျှောက်တဲ့ အခါဖြစ်ဖြစ်၊
မင်းရဲ့အကျင့်သီလနဲ့ မင်းရဲ့ဂုဏ်သိကာကို ဆက်လက်ပြီး ထိန်းထားနိုင်လို့ရှိရင်..........
မင်းရဲ့ ရန်သူတွေအပေါ်မှာရော၊ မင်းချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအပေါ်မှာပါ၊
မင်းရဲ့စိတ်က တသမတ်တည်း ထားနိုင်လို့ရှိရင်
မင်းရဲ့ရန်သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မင်းချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းကဖြစ်ဖြစ်
မင်းကိုဘယ်လိုမှ ထိခိုက်အောင် မလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်......
လူတွေအားလုံး မင်းအတွက် အရေးကြီးတာပဲဆိုပေမယ့်
အဲဒီ အရေးကြီးမှုဟာ သိပ်အများကြီး မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို
မိနစ်တိုင်းစကန့်တိုင်းကို မင်းအတွက် အရေးပါအောင် သုံးနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်...........
အဲဒီ အချက်တွေ အားလုံး
မင်းလူဖြစ်ပြီ ..... လူကလေး”
Posted by Junior Win at 10:03 PM No comments:
ဒီတကြိမ် Give meabreak! အစီအစဉ်မှာတော့ ငွေစင်ရော် စိတ်ကြိုက် ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်တင် မလားလိုိ့။
ကဗျာဆရာ မောင်သော်က ရဲ့ င်္နှစ်သုံးရာ မှ ပဲ့တင်သံ အသံလှိူင်း ကဗျာများ င်္ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲကပါ။
အင်း.........အခုတင်ပြမယ့် ကဗျာ ကိုရေးတဲ့သူကတော့ ဆရာမောင်သော်က မဟုတ်ဘူး။ ဆိုလိုတာက အဲဒီစာအုပ် ရဲ့အမှာစာ မှာ မောင်သော်က က သူ့စိတ်ကြိုက်ဘာသာပြန်ကဗျာတပုဒ်ကိုရွေးပြထားတာပါ။
ကဗျာမူရင်းက INVICTUS ( William Ernest Henley)ဖြစ်ပါတယ်။
င်္ အဲဒီကဗျာ ကိုဘာသာပြန်သူ ကတော့....င်္ လို့ဆရာမောင်သော်က က အခုလို မိတ်ဆက်ထားကြောင်းပါ။
င်္...ထိုကဗျာလေးကို မြန်မာပရိသတ်အား ပြန်ပေး ခဲ့သူမှာ ကဗျာမဆန်လှသည့် နိုင်ငံရေးသမား သခင်အောင်ဆန်း (၀ါ) ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကဗျာလမ်းသစ်ထွင်သူ များတွင်ပါဝင်သင့်သည် ဟုဆိုရလောက်သည့် မျိူးချစ်လူငယ်တဦး က ရန်ကုန်တကသိုလ် ကျောင်းသားများ
သမဂ္ဂ မှထုတ်ဝေသည့် အိုးဝေ မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ င်္
ကဗျာကိုလဲခံစားရင်း ဆရာမောင်သော်က ရဲ့ မှတ်ချက်လေးကိုလဲ အမှတ်တရ ထဲ့ပေးလိုက်တာပါ။
ဆရာမောင်သော်က ရဲ့ နှလုံးသား ထဲက ကဗျာလေး တွေကိုလဲ နောက်တခါ Give meabreak! အစီအစဉ်မှာ တင်ပြသွား ဖို့ရှိပါတယ်။
လောကဓံတရား၏ ကြမ်းကြုပ်သော လက်ဆုပ်တွင်းသို့
ကံတရား၏ ရိုက်ပုတ်ခြင်း ကြောင့်
ငါ၏ ဦးခေါင်းတို့သည် သွေးဖြင့်ချင်းချင်းနီ၏
ဤကမ္ဘာ၏ အခြားမဲ့ ၌
သေခြင်းတရား သည် ကြောက်ဖွယ် ငံ့လင့်၏
သို့သော် - ငါ့အား မတုံလှုပ်သည် ကိုသာတွေ့ရအံ့
နောင်တွင်လည်း မကြောက်ရွှံ့သည် ကိုသာလျှင်
ငါသာလျှင် ငါ့ကြမာ၏ အရှင်
ငါသာလျှင် ငါ့ဘ၀၏ သခင် ဖြစ်တော့သည်။
Posted by Junior Win at 10:28 PM No comments:
English For All မဂ္ဂဇင်း နိုဝင်ဘာလ ၂၀၀၆ တွင် ကဗျာဆရာ အမည်မသိ ၏
Choosing the Right ကဗျာ ကို ဂျူနီယာဝင်း က ယခုလိုဘာသာပြန်ထားသည်ကိုတွေ.လိုက်ရပါသည်။
...ကျွန်ုပ်အား မှန်တာကို လုပ်ဖို. သတ္တိပေးပါ။
...ကျွန်ုပ်အား မှန်တာကို ပြောဖို. သတ္တိပေးပါ။
...ကျွန်ုပ်အား မှန်တာအတွက် တိုက်ဖို. သတ္တိပေးပါ။
..........ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်း ၊ ကောင်းမြတ်ခြင်း
..........တရားမျှတခြင်း နှင့် စစ်မှန်ခြင်းတွေအတွက်
... ကျွန်ုပ်၏ ငယ်ဘ၀မှာ မှန်တာကို ရွေးဖို. သတ္တိ
... ကျွန်ုပ်မှားနေတဲ့အခါ ၀န်ခံရဲဖို. သတ္တိ
...ထိုတနေ.ကို သီချင်းလေး တပုဒ်နှင့် ရင်ဆိုင်ဖို.သတ္တိ
... ကျွန်ုပ် ၏စိတ်ကူးများ နှင့် ကျွန်ုပ်၏လျှာကို ထိမ်းချူပ်ဖို.သတ္တိ
... ကျွန်ုပ် ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ မှန်တာကို ရွေးဖို.သတ္တိ
...............အဒီသတ္တိတွေကုိ ကျွန်ုပ်အား ပေးသနားပါ။
Posted by Junior Win at 10:25 PM No comments:
’ငွေစင်ရော်’ အမည် ရွေးချယ် ဖြစ်ခဲ့ပုံ။ ‘
“အများမိုးခါးရေသောက်သလို လိုက်သောက်နိုင်ခဲ့လျှင် ယောယိမ်းလိုက် ဘသားယိမ်းလိုက်” သူများနည်းတူ လုပ်နိုင်သဂ်ျဘ၀မှာ အဆင်ပြေမည်။အများမိုးခါးရေသောက် သည်.အချိန်တွင် ကိုယ်ချန်နေခဲ့လျှင် ပြသာနာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခု တက်လာလိမ့်မည်။ အများနည်းတူ မိုးခါးရေသောက်သည်.အလုပ်မှာ လုပ်ရတာ အလွယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ကှ်ျအလွယ်ဆုံးအလုပ်ကို မလုပ်နိုင်၊ ကိုယ့် မှာအခက်ဆုံးဖြစ်နေသူ တစ်ဦးအဖို.မှာ အသက်နှင့်ကိုယ် မြဲသဂ်ျခံလိုက်ဦးတော့၊ မသေမချင်း ခံလိုက်၊ ပျော်ပျော် ကြီးခံလိုက်။ ကှ်ျသည်ပင် လူဖြစ်ရသည်.လူ.ဘ၀အရသာဖြစ်ပေတော့သည်။’
ကှ်ျသည်ပင် ‘ယောနသန် စင်ရော်’သို.မဟုတ်’ဂျိူနသန် ဆီးဂါး’ ဘာသာပြန်သူက ကောင်းနိုးရာရာ ကင်ပွန်းတပ်ပေးလိုက် သည်. ’ငွေစင်ရော်’ ၀တ္ထု၏ အရသာဖြစ်ပေတော့သည်။
ယင်းကား စာရေးဆရာမကြီး (ဒေါ်)ခင်မျိူးချစ် ၏ ’ငွေစင်ရော်’ ဘာသာပြန် ၀တ္ထု ထဲမှကောက်နှုတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကောက်နုတ်ချက်ကိုသဘောကျမိရာမှ က်ျအမည်ကို ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
ချစ်သောစင်ရော် ငွေစင်ရော် ။
Posted by Junior Win at 10:10 PM No comments:
English for all magazine ဇန်န၀ါရီ လ၂၀၀၇ တွင် ဖော်ပြခဲ့သော ကဗျာဖြစ်သည်။
ကဗျာမူရင်းမှာ P.G. Wodehouse ၏ Be to-day ! ဖြစ်သည်။
Be to-day !
The past is dead !
With every fibre,
With every drop of your blood !
ထိုကဗျာကို ဂျူနီယာဝင်း က ယခုကဲ့သို. ဘာသာပြန် ထားသည်ကိုတွေ.ရပါသည်။
ရှိရှိသမျှသော အာရုံကြောတွေနှင့်အတူ ရှိနေပါစေ။
ရှိရှိသမျှသော အကြောအမျှင်တွေနှင့်အတူ ရှိနေပါစေ။
အသင် ၏ အနီရောင် သွေးစက်တွေနှင့်အတူ ရှိနေပါစေ။
Posted by Junior Win at 10:06 PM No comments:
ဂျူနီယာဝင်း ၏ ထွက်ရြှိပီးသောစာအုပ်များ
.....၂၀၀၄ ဇန်န၀ါရီလ ဒေါင်းစာပေ မှထုတ်ဝေသည်။
၂။၁၂ လရာသီပန်းများနှင့်ပွဲတော်များ (ဘာသာပြန်) (ဒေါ်ခင်မျိူးချစ် ၏ မူရင်း နှင့် တွဲလျက်)
.....၂၀၀၄ ဧပြီလ ဒေါင်းစာပေ မှထုတ်ဝေသည်။
၃။ကောင်းကင်ရံ မှ ယှဉ်ပြိုင် မူများ
.....၂၀၀၅ မေလ မုံရွေး စာပေ မှထုတ်ဝေသည်။
၄။အဘိဓာန် dictionary of mathematics (ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း နှင့် တွဲလျက်)
.....၂၀၀၅ စက်တင်ဘာလ ဒူဝံ စာပေ မှထုတ်ဝေသည်။
၅။တွေးမိသောအတွေးများ နှင့်အတွေးမြင်ဆောင်းပါးများ စုစည်းမူ
.....၂၀၀၆ မေလ ယူနတီ စာပေ မှထုတ်ဝေသည်။
၆။အဲလစ် နှင့် အံ့ဖွယ်ကမ္ဘာ (lewis carrol’ Alice in wonderland ဘာသာပြန်)
.....၂၀၀၆ သြဂုတ်လ မုံရွေး စာပေ မှထုတ်ဝေသည်။
ဂျူနီယာဝင်း blog ကို ငွေစင်ရော် မှ စီစဉ်သည်။
Posted by Junior Win at 4:14 AM No comments: